ဖျောက် - အပြာရောင်ကို tick သို့မဟုတ်မွငျနောက်ဆုံး | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဖျောက် - အပြာရောင်ကို tick သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ
ဖျောက် - အပြာရောင်ကို tick သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ APK ကို
သင် Hide, သူတို့ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရန်အခြားသူများကိုမလိုချင်ကြဘူးဆိုရင် - အပြာရောင်ကို tick သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့သင်တို့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏နေပါသည်!
ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ app ကိုနှင့်အတူလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်ချတ်ပေါ်တွင်သင်၏ privacy ကိုပြန် Recover ။ သငျသညျယခုမဆိုနောက်ဆုံးမြင်ကြအသိပေးစာသို့မဟုတ်အပြာရောင်နှစ်ဆစစ်ဆေးမှုများထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ, ရုပ်ဖျက်သင့်သူငယ်ချင်း၏အဝင်မက်ဆေ့ခ်ျများဖတ်ရှုဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်, ကအားလုံးကိုထိပ်စာပို့ခြင်း apps များအဘို့အအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့! အဘယ်သူမျှမကပိုလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများမရှိစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားများ, အပြာနှစ်ဆကို tick သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရအဘယ်သူမျှမဖတ်ပါ!
ဖျောက် - အပြာရောင်ကို tick သို့မဟုတ်မွငျနောက်ဆုံးသုံးစွဲဖို့တကယ်လွယ်ကူသည်: သင်ကဤတမန် apps များထဲကတစ်ခုကနေမက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ, ကလည်းဖျောက်အတွက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် - အပြာရောင်ကို tick သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့လျှောက်လွှာ။ သင်အလိုရှိအခါတိုင်းရှိတယ်, သင်ကမြင်ကြပြီဟုသိမှတ်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမဆိုစရာမလိုဘဲ, လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖတ်လို့ရပါတယ်။
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်း mode ကို activate လုပ်ဖို့လိုအပ်နေခြင်းမရှိပါ:
ဖျောက် - အပြာရောင်ကို tick သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရသင်အလွယ်တကူမက်ဆေ့ခ်ျကိုဝင်ရောက်နှင့်ပင်တမန်အားဖြင့်သူတို့ကို sort နိုင်မည့် interface ကိုသုံးစွဲဖို့လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောထောက်ပံ့!
ဤတွင်ဝှက်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ကြောက်မက်ဘွယ် features တချို့ကိုများမှာ - အပြာရောင်ကို tick သို့မဟုတ်မွငျနောက်ဆုံး:
သင့် MESSAGES များ INCOGNITO ဖတ်ရန်
- အဘယ်သူမျှမကနောက်ဆုံးမြင်ဘယ်သူမျှမကအပြာရောင်, ရှိသမျှလူကြိုက်များ chatting apps များအဘို့မြင်ကြခြင်းမရှိပါနောက်ဆုံးအချိန်လူမိုက်ကံကောင်း။
- နှစ်ဆအပြာရောင်စစ်ဆေးမှုများအသိပေးစာထွက်ခွာမရှိဘဲသင်၏ဓါတ်ပုံများ, ဗွီဒီယိုများနှင့်အသံဖိုငျမြားကိုခံစားကြည့်ပါ
ဒီ application များပေါ်တွင်ပြသအားလုံးသည်အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
အဲဒီကုမ္ပဏီတွေက '' အမှတ်တံဆိပ်၏အဘယ်သူမျှမ app ကိုအပေါ်ပြသလျက်ရှိသည်။
ဖျောက် - အပြာရောင်ကို tick သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ
11.10 ကို MB
အပျော်ရွှင်ဆုံးစိတ် Apps ကပ
WhatsDelete: ကြည့်ရန် ...
တစ်ခုခု Hide - ...